Dzimwe nzira kune yechizvarwa Apple Tarisa kunyorera kudzora kurara | Ndinobva mac
Dzimwe nzira kune yechizvarwa Apple Tarisa app kudzora kurara
Chimwe chezvinhu zvitsva zvakavandudzwa zvakanyanya muApple Watch nyowani yaive yekurara yekutarisa mune vashandisi vayo. Nekudaro, kunyangwe iko kunyorera kuri kwakanaka, tinofanirwa kufunga kuti pane zvimwe zvingasarudzwa muApp Store uye kuti zvinoshanda chaizvo, zvirinani zvirinani kana zvichikwanisika. Isu tinoreva Autosleep uye Kurara ++.
Chizvarwa cheApple Watch chikumbiro cheyero yekuyera chakanyatsoitwa. Yakanyanya Apple maitiro. Ndiri kureva kuti semuenzaniso, kuona iyo yekurara data ichiongororwa newachi, tinogona kusarudza pakati pekuiona muApple Watch application kana mune Hutano application pane iPhone. Data chairo ishoma. Tichangoona kuti takarara kwenguva yakareba zvakadii uye huwandu hwekurova kwemoyo (izvo zvinoenderana nezvidzidzo zvinogona kufanotaura kutapukirwa neCOVID zviratidzo zvekutanga zvisati zvaonekwa.
1 Kurara Auto
2 Kurara ++
Iyo ingangoita yekurara tracker app yeApple Watch inonyanya kufarirwa paApp Store. Asi ndeyekuti ine pfungwa yayo uye inorema. Ipa imwe yeinonyanya kutsanangurwa data, inosanganisira kuongororwa kwakadzama kwekurara, mhando yekurara, kurova kwemoyo, kurara zvakadzika uye yakareba etcetera. Izvi zvinotiyeuchidza nezve Apple's chiitiko chekutevera system nekuti inoshandisa ringi system kutibatsira kuongorora iwo manhamba. Iyo huru interface inoratidza iwo ekurara mhete, yekurara mhando, yakadzika hope, uye Beats paminiti.
Iine data yakawanda, zvakajairika kuti iyo AutoSleep interface inogona kuve inoremedza kana chirongwa chatanga. Kuti urwisane neizvozvo, iyo app zvakare inopa yakakura kuwedzeredza paApple Watch pachayo izvo zvinoita kuti zvive nyore kukurumidza kuona yekurara data yezuva razvino.
Kurara ++ ndechimwe chikumbiro chakakurumbira. LIyo huru interface inopa yakajeka dudziro yemaitiro ako ekurara mukati memazuva ekupedzisira. TIyo zvakare inopa yakawanda yedata pane zvinoitika, macircule, zvikamu uye zvimwe zvinhu zvine chekuita nezvehope metric. Zvakanakisa ndezvekuti tinogona kuona imwe yakadzama nguva yekurara, kunyangwe pazororo, kusagadzikana kana kumuka.
Zvinoenderana newe, ndeapi eakasiyana aya aunoda kutanga kutamba. Tinokurudzira kuti uzviite neavo veApple Watch uye sezvo uchida zvimwe sarudzo, sarudza imwe yeiyi kana chero imwe yaunoona yakakodzera. Ehe, yeuka kubhadharisa iyo Apple Watch usati warara, kunyanya kana iwe uine zuva rakareba kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dzimwe nzira kune yechizvarwa Apple Tarisa app kudzora kurara
Nguva yekufamba ndiyo nyowani Apple Fitness + ficha iyo icharatidza chete audios
Google Drive yedesktop ichave nerutsigiro rweMacs neM1 munaKubvumbi.